10 Hab Ood Ku Hanan Karto Farxadaada Shaqo - QaranJobs.com - Somali Jobs - somalijobs - qaranjobs - Daily Somalia Jobs
Home/Career Tips/10 Hab Ood Ku Hanan Karto Farxadaada Shaqo
Waxay qaadanaysaa amin yar inaad tirtirto kalsamaantaada ilaa kalsamaan darro. Balse waxay qadanaysa wakhti badan iyo dedaal dibu cusboonaysiinta iyo helidda himmadaada iyo farxadaadii markale.
Talaabada u horayse’ee farxadaada shaqo waa noqoshada, ”Sarkaalka Sare Ee Hawlgalinta” iyo qaadida lahaanshiyahaaga nololeed iyo xirfadeed.
Hoos waxaynu kaga hadli doonaa 10 qoddob oo ku saabsan sida aad ku heli karto Farxaddaada shaqo ee hawsha aad ku hawlan tahay.
Badiyaa waa Doorashadaa.
Waxaad tahay ruuxa kaliyee qaadan kara go’aan tixgalinleh/lamahadin karo si aad ugu faraxsanaato shaqadaada. Xataa wajihida tubta qalloocan ee kugu haysata goobta shaqadaada. Waxaad u baahantahay inaad u fikirto si togan. Waad samayn kartaa intan adigoo u eegaya inay wacnaan tahay iyo inaanay fiicnayn. Ka dheerow dadyowga u fikira sida taban ee ku dhago barjaynaya. Kana agdhawaw kuwa ku faraxsan shaqada. Korbay kuu hayidayaan oo u hinjinayaan hammigaaga & doonnistaadaba eh.
Qaad Masuuliyadaada Horumarineed
Ruuxna kuguma tixgalinayo intaad tahay inkabadan. Maanta xirfaduhu dhammaantood waxay ku saabsan yihiin ka guurida door ilaa midkale. Urursiga khibrado aad ku marto jidkaa dheer & hayaanka kaa horeeya. Dhinac socodka iyo shaqooyinka tooska ahbaa inbadan ka muhiimsan haysashada marin aan toosnayn oon hore u socod lahayn. Haka cabsan inaad gacanta taagto iyo inaad waydiiso intaa waxkbadan.
Ha xishoon; Waydii Warcelinta.
Dadyowga badankoodu, Dib u eegista waxqabadka sannad laha ahi waa marka kaliya ee ay eegaan warcelimaha kaga imanaya bulshada ay la dhaqmayaan. Waana habka kaliyee keensada walaaca ugu badan. Millenials iyo Gen Xers-baa u luxay madaxa habkan, iyagoo quudanaya warecelintooda ay ka helayaan maamulayaasha ku guda jira shaqooyinka joogtada ah. Waxay doonayeen inay ogaadaan horaantii iyo hadda siday wax u qabtaan dadyowga qaarkood. Waa aminta qudha ee ay helaan mahadcelin ku lug leh sida wacan ee ay wax u qabteen dhinacyada kale. Waa fursadaha khalad shaqo sixitaan ka hor intaanay noqon mushkilad aan laga gudbi karin. Haddii aynu rumaysannahay in midkasta oo inaga midi uu qaado masuuliyadiisa horumarineed, kadibna uu helo warcelin waa midkamida furayaasha isleegta.
Ururso Nidaamyadaada Taageero.
Raadi koox garabsiin dad ah kuwaaso kula wadaaga kaalana mid ah khibradda iyo qaabdhismeedkaaga nololeed oo kale. Taasi waxay kaa caawinaysa helidda cadaadis kugu xejinaya shaqadaada. Lahaanshaha kooxi waxay horseed kanoqon soo bandhigashada dareenadaada si nabada.
Ha Isku dayin inad bedesho cidkale!
Ma badali kartid cidkale. Habka kaliyeed ula falgali karto isaga/iyada waa in aadan u ogolaan dadyowga kale inay saamayn ku yeeshaan halgankaaga, saamayn taban oo aan wax faaiido ah kuu soo wadin. Waxa jira saaxiib kugu jihayn kara tub khaldan marmarka qaarkood. Haddii aad u ogolaato inay ku hantiyaana. Way hagidoonaan himmadaada shaqo.
Ka Hortag Tabnaanta/Qalloocnaanta.
Go’aan qaadashada si aad ugu faraxsanaato shaqadaada macneheedu waa ka fogaanshaha Xanta, wada sheekaysiga taban iyo Dadka aan faraxsanayn. Mashaakil malaha tognaanshaaga nafeed balse ogsoonow dadyawga sida taban u fikiraa waxay leeyihiin saameeyayaal sidaad dareemi karto. Waxay u janjeedhaan nuugista/madhinta dhammaan ogsajiinta hawada ee togan oo ay halgan u galayaan inay dibada kaasoo dhigaan ama ku wareeriyaan.
Ka dhig dhibaatooyinkaaga qaar kabaxsan goobta shaqo!!
Markaad ka werwersan tahay mushkilado shakhsiyeed, run ahaantii way adagtahay inaad noqoto qof faraxsan iyo qof wax soosaar shaqo yeesha. Sidoo kale asxaabtaada shaqo ma rabaan in kugula haftaan mushkiladahaaga, xataa hadii ay kula arkaan, i rumayso markaan kuleeyahay makarayaan!
Awoodda saar toosnaanta/tognaanshaha.
Xataa haddii aanad jeclayn shaqadaada, badanaa waxa jira dhinacyo kugu hirdiyi kara inaad jeclaan karto. Raadi waxyaabaha kugu riixaya in aad jeclaato, Awooddana saar. Ku ladhida hababkaa lagugu kordhiyo ee maalintaadana ka faaiidayso.
Dadku badidood way ku qoslaan yeelashada “Saaxiib fiicanoo shaqo” Laakiin run ahaantii waa muhiim. Tiro saacado’oo badan waxaynu ku bixinaa shaqada. Waa muhiim inaad leedahay tiro koobanoo koox dada oo xaqiiqo ahaan ku tidcan garabgal kaaga, khayraadka, wadaagida iyo daryeelidaaba.
Dibada ugasoo bax xabsiga
Mararka qaarkood waxaad u baahan in aad shaqo-daada ka tago, ma jirto doorasho kale oo aan taasi ahayni. Go’aan qaadasho ka adag arrintaasi ma jirto marka aad uga war-warayso arrimo la xidhiidh maaliyad aad hawlahaaga ku maarayso. Waxaad markaasi oo kale u baahan tahay in aad dhinac iska dhigto khayraadka si aad xoriyad & faraxsanaan aad u hesho.
Gebi ahaan waxaad noqon mid farxad iyo caafimaadsan wadar ahaan dhinacyada nolosha, maxaa yeelay waxaad leedahay hoggaan, aanu qofkale awoodiisa lahayn kasaarida iyo carqaladaynta noloshaada aan adiga ahayn. Ha u ogolaan qofnaba inuu xakameeyo masuuliyada hawlgalintaada.
Barri waa maalintii koowaad ee aad u diyaar garoobi lahayd qorshaynta hiigsigaaga iyo xirfadaada nololeed – Illaahay ha kugu garab galo.